जुनलाई नियाल्दै गर्दा !
जापानको मुटु सिन्जुकुमा हुने कार्यक्रम । आयोजक आदिवाशी जनजाती महासघ जापान । कार्यक्रम सङ्योजक सुकुमान थिङ तामाङ । कार्यक्रम ११ तारिख साझा ६ बजे । नेपाल हुँदा केही पर्यो कल गर्ने बानी ... साथी-भाईबाट अझै डाइरेक्ट कल नै आउछ । मेरो हर्कत भने फेरियको छ । हिजो आजु कल भन्दा बढी मेसेज हुन्छ । हो आयो मेसेज मेसेन्जरमा सुकुमान थिङ तामाङको नामबाट । आइतवार आधी दिन काम साझको टाइम अनी १० बर्ष पछी मेरो शिर्शककी जुन अर्थात हिरो अफ द एसिया (चरिमाया तामाङ) लाई भेट्ने लाल्सा । नेपालमा तामाङ डाजाङले महिनाको अन्तिम शनिबार साहित्यिक स्रिङ्खला चलायको थियो त्यही कार्यक्रमको अतिथिको रुपा उनिलाई भेटेको थियो । १० तारिख सम्म आउने न आउने फिक्स गर्नु पर्ने, मैले ड्याम्मै ओके ठोके । २-३ बजे सम्म काम हुन्छ कहाँ भेट्ने सोधी हाले । थिङ ज्योज्योको रिप्लाई आयो दिन भर टोक्यो घुम्ने ५ बजे कार्यक्रम स्थल आइपुग्ने । मैले खोकी त हालेको थिय २-३ बजे सम्म काम केको २-३, कामले ७ बजे सम्म नि छोड्ने छाटकाट थिएन । यसो कम्पनीको भितामा हेरेको ४:३० भैत गो ।
अन्तर यामी भएर खोकेको डुब्ने पक्का पक्की भो । अनी कसे टुप्पी र हिंडे कार्यक्रम स्थल तिर । ५:४२ मा सिन्जुकु ओर्लिय कार्यक्रम स्थल कता हो ? कता ? ल्होछार प्रोग्राम भाको भए यसो स्टेसन तिर तामाङ ड्रेस लाएर यता उता हिडेको देखिन्थ्यो होला यो अलिक रमझमे कार्यक्रम परेन । चरी माया भेट्न हिंडेको, मैले चरी नि देखिन ...मुसोनी देखिन, यो कार्यक्रममा जाने टाइपको । फेरी मेसेज भो जापान बासी काम्रेड हवल चन्द्र लामासङ्ग । निर्धारित समय भन्दा २० मिनेट ढिल गरी पुगियो गन्तब्यमा ।
हल भित्र के छिरेको, भक्का भक कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि अनि प्रमुख अतिथिलाई जापानसम्म ल्याउन बन्दोवस्त गर्ने प्रोफेसर नाकामुरा फेमिली भन्दानी मै चाँही सर्बस्व भन्ने सोच्दै नमस्कार ठोक्दै । नाम फलाना, तिलाना सस्थाको अध्यक्ष भन्दो रछ । घुम्दै पालो म सम्म आयो । सबैको कुरा सुनेको जस्तै गरौ, नाम त थियो तर अध्यक्ष पद थिएन । भुतपुर्ब भनौ जापानमा केहीको सदस्यसम्म नभा मुन्से । यसो सम्झे जापानमा पहिलो चोटि भेट्दा या आफ्नो परिचय दिदा पद-सदको मतलब छैन ब्योन अनि फ्याफुल्ला सङ्गै नाम भने दोर्जे तामाङ । धन्यवाद नि दिए, थचक्क बसे ।
तामाङ भाषामा एउटा उखान छ । ह्रङ्ला बानी खानाङ निसे क्याबा थोसी क्याङ ( आफ्नो बानी कहाँ जला दाबिलो बोकी खडा) । छोटो समयको तयारी, छोटो समय छ भन्दै गर्दा मन्तब्य राख्नेहरुको मन्तब्य यती लम्बिदै थियोकी रबरको डोरी जस्तो । कार्यक्रम संचालक भनेको माइक पास गर्ने पुल हो । पुर्बेली लुङ्गाले बेला बेला भावनामा बकिदै कबिता भन्दै गर्दा बक्ताको मन्तब्यले मन छोयो भन्दै आफ्नो भावना अभिब्यक्ती राख्दै गर्दा कार्यक्रम निर्धारित समय भित्र नसक्लाकी भन्ने लागियको थियो, जब sophia university जापानमा global studies बिषय पढाउने प्रोफेसर मासाको तानाकाले जापान बिकासित मुलुक भए पनि नेपालमा भन्दा बढी मात्रै नभै विश्व मै दोस्रो मानब बेच बिखन हुने गरेको कुरा खुलाए । म सक भएँ । यत्रो बिकसित मुलुक अनी यस्तो अवस्था । उनिले थपिन् नेपालमा जस्तो पीडित आँफैले सस्था स्थापना गरी आफ्नो अधिकार र बेच बिखनको बिरुध सङ्घर्स जापानमा अझै भएको छैन । २०१७ मे मा भर्खर पीडितहरुले सस्था स्थापना गरेको छ । विश्व मानब बेच बिखनको हिसाबले जापान दोस्रो ठुलो मार्केट अनि यही आफ्नो अधिकारको कुरो सुरु नै भएको छैन । यसरी हेर्दा जापानी नागरिकले नेपालबाट धेरै कुरा सिक्नु पर्ने छ । चरिमाया तामाङलाई जापान ल्याउनुको करण खुलाउदै मासाकोले थपे ।
जापानमा हुने महिला बेच बिखन तथा योन बजारमा स्कुले नानीहरुसम्म प्रयोग हुने गरेको, आकिहाबारा, किन्सिचु लगायत धेरै जापानका शहरहरुको उदाहरण दिदै चरिमाया तामाङसङ्ग ति क्षेत्रको भिजिट गर्ने कुरा पनि राखे । उनले आफ्नो कुरा अरु नेपाली बक्ताले जस्तो लामो समय लिएर राखेन । छोटो सुचना मुलक भनाइ अनी पालो आयो कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको ।
प्रमुख अतिथिले कार्यक्रमको समय कम छ भन्दै आफ्नो मन्तब्य छोटकरीमा राख्नु होला भन्दै गर्दाको लामो लामो बोल्नेहरुको कुरो कोड गरेको रहेछ । माइक पायो भन्दैमा माइक अठ्यायर बस्दैमा हाम्रो समस्याहरु र हामीले गर्नु पर्ने काम कम नहुने भएकोले छोटो बोल्ने धेरै काम गर्दै जानु पर्ने कुरोमा जोड दिइन् । दलालको फन्दामा परी मुम्बईमा बेचियकी, मेरो शिर्सककी जुन छुचिछुचि पनि पो रहेछिन् ।
सिन्धुपाल्चोकको हैबुङदेखी मुम्बई, मुम्बई टु नेपाल । सक्ती समुहको स्थापना अनि हिलारी क्लिन्टनको हातबाट पाएको त्यो अवार्डसम्मको यात्रा । मैले धेरै पटक आसु झारेको छु, ``जुन``को भोगाइलाई सुनेर । फेरी यो पटक पनि हलको पछील्लो बेन्चमा बसेर थाम्न खोजे जस्तो गर्दै रोए । बार बार हर बार किन सुनिन्छ त्यो दर्दनाक कथा ? किन बक्न लगाइन्छ ? न त्यो कुरा पहिला नसुनेको, न पढेको हुनु । आज फेरी त्यही कथा दोहोर्याएर सुने । रन्चे आदतले गर्दा म फिल्महरु र अली सामाजिक बिषयबस्तु समेटिएको लेख या पुस्तक पढ्दा एक्लै पढ्ने गर्छु । हुनु त आसु पुस्ने मेरो अनी मेरो गाउँले हिरा योन्जन भाइको अलगै तरिका छ । फिल्म हलमा या नाटक हेर्दा, टि.भी हेर्दा आसु झरी गो भने यसो दाँया बाँया बेसेको मान्छे हेर्ने अनी गुन्द्रुके कपाल मिलाए जस्तो गरी आसु पुस्ने । त्यो उपाय फेरी युज भो ।
गत बर्षको अन्तिम अर्थात क्रिस्मस छेक हुँदै जनवरी महिना भरी जापानको मिडियामा एउटा समाचारले ठुलो स्थान पाएको थियो । समाचार थियो, जापानले बिभिन्न समयमा योन स्वार्थ पुरा गर्नको लागि दक्षिण कोरियाका महिलाहरुको प्रयोग गरेको बारे । कोरियामा कार्यरत मानब अधिकारवादी सस्था तथा महिला अधिकारवादी सस्थाले त्यसको बिरोधमा कोरिया स्थित जापानि दुताबासमा कोरियन महिलाको सालीक बनाएर बिरोध गरेका थिए । केही बर्ष देखी चल्दै आएको यो खाले बिरोध सैलीले यसपाली पनि निरन्तर्ता पाए सङ्गै, जापान सरकारले अहिलेसम्म गरेको शोषणलाई स्विकार्दै क्षती पुर्ती दिनु पर्ने माग गरेका थियो । यसले पनि के कुरा पुस्टी हुन्छ भने जापानमा मानब बेचबिखन तथा योन शोषण सदियौदेखी चल्दै आएको थियो र अझै पनि यो कुराले निरन्तर्ता पाउदै आएको छ ।
ब्यस्त समयको बाब्जुत ३० जना भन्दा बढी सस्थाका प्रतिनिधि निर्धारित समयमै उपस्थित उक्त कार्यक्रममा पत्रकार महासंघका अध्यक्ष भने कार्यक्रमको पुच्छार अर्थात सभापतिले कार्यक्रम समापन भएको घोषणा गर्नु आटेको बेला आईपुगे । यथा स्थानमै आसन ग्रहन गरे । यसो आफुलाई पत्रकार भनी परिचय दिएकाहरु कोही अघिनै कार्यक्रम नसक्दै कुले ठोकेका थिए । कोइ भर्खर आउँदै थिए । अनी न्युज के लेख्छ होला ? कि कपि पेस्ट ?
कार्यक्रमको सुरुमै संयोजक सुक मान थिङले भनेका थिए, ``यो कार्यक्रम आधुनिक दासत्व र मानव बेच बिखन बिरुधको अभियानलाई समर्थन गर्न जापानमा रेहेको आदिवाशी समुदायले गरेको पहिलो कार्यक्रम हो । अन्तिम होइन । कार्यक्रम हत्तार हतारमा गरिएकोले भुलहरु भएका छन् । आगामी दिनमा सुधार्दै अब बौधिक र ठोस् नतिजा दिने कार्यक्रमहरु गर्दै जाने छौ । स्वागत मनतब्य सङ्गै कार्यक्राम बारे उनले खुलाएका थिए ।
कार्यक्रममा उपस्थिती जनाउनु पाउनु नै मेरो लागि सौभाग्य नै मान्नु पर्छ अनी यसरी धेरै थरी सस्थाका प्रतिनिधिहरुको कुरो । कार्यक्रममा समाज सेबी अनिता गुरुङ, PHD स्टुडेन्ट जानुका खड्का NRN (ICC), महिला सदस्य कालिका केसी लगायतले आफ्नो भनाइहरु राखेका थिए भने कार्यक्रम आदिवासी जनजाती महासंघ जापानका उपाध्यक्ष पेमा लामाको सभापतित्वमा भएको थियो । कार्यक्रम सक्के पछी हामी नजिकैको गजल नेपाली रेस्टुरेन्टमा खाना खायौ, तामाङ भाषा बोल्न नजाने पनि तामाङ जाती, धर्म, सस्कृतिलाई हृदय देखिनै माया गर्ने पुर्बेली ज्योज्यो, रेखा लामा (तामाङ समाज जापानका सस्थापक अध्यक्ष) आजको प्रमुख अतिथि चरिमाया नाना सङ्ग गफिन थालनु भो, हामीले तामाङ म, सिन्धुलीका आङा रस्मी थिङ, अनी सुकमान थिङ ज्योज्यो, भाउजु (सुकमान थिङ ज्योज्यो को श्रीमती) अनी चरिमाया नाना लगायतले तामाङ भाषामै कुरा गर्यौ । लाग्यो एक पटक नेपालमै छु । भोलिदेखि म पनि जापानिज हुने छु चरिमाया नानाले भन्नु भो । ब्यस्त ब्यस्त अनी ब्यस्त । बिभिन्न स्थानको भ्रमन अनी सोफिया युनिभर्सिटी, मेइजी इन्टरन्यास्नल युनिभर्सिटी तथा ओसाकामा हुने कार्यक्रम । कार्यक्रमको सेडुल यती लामो थियो २० तारिखसम्मको जापान बसाइमा, बिचमा भेट्घाट हुने चान्सकम । भिजिटिङ कार्ड आदन प्रदान गर्यौ अनी नमरी बचेँ फेरी भेट्ने बाचा सहित सायोनारा भन्यौ ।
टोक्यो डायरी २०१७ जुन